Inkinga ye-737 Classic yamaphakethe amaningi
Umbuzo Inkinga ye-737 Classic yamaphakethe amaningi
unyaka 1 6 edlule - unyaka 1 6 edlule #826 by deckerb
Thanda leli phakheji, ikakhulukazi imisindo ebonakalayo, ukukhanyiswa kwe-cockpit okuthuthukisiwe nokuningi.
Kubonakala sengathi kukhona inkinga nayo ngokuzumayo iqhuma kuze kube sezingeni lesigcawu ekukhuphukeni. Futhi ukugxila kumqulu wokuphumula kuphuza kancane ukusheshisa, noma ngaphandle kwe-auto. Yiba nesikhathi esinzima ukufika ngisho ne-140 emgqeni wokungena. Uma sibheka ezinye zezimvo ezikukhasi lokulanda, akuyena owodwa ngalolu daba.
Noma yiluphi ulwazi olulungiswa noma lokusebenza luzokwaziswa.
Ukuhlela kokugcina: Unyaka we-1 izinyanga ezingu-6 ezedlule deckerb. Isizathu: Amagama alahlekile
unyaka 1 6 edlule #827 by xHobbit420x
I-Google futhi ulandele iphakheji ye-164 yama-737.
unyaka 1 6 edlule #828 by deckerb
Siyabonga kodwa hhayi ngempela. I-737 ezenzakalelayo ayinayo izithuthukisi ezinhle ezenziwa leli phakethe.
unyaka 1 6 edlule #829 by bencas
ziye zazama ukusetha ithebhu yokunquma ibekwe kumadigri we-1.7-1.8 okufanele alungise i-angle yokumisa ngokuzumayo.
Ngiyabonga wathola: 16
unyaka 1 3 edlule - unyaka 1 3 edlule #939 by DRCW
Lesi yisikhathi sesibili engikufunde ngale nkinga, kubonakala sengathi lokho akuyona inkinga ye-737-800 kuyinkinga nesizukulwane esidala salesi simodeli. Kulula ngempela ukulungisa ... Iya ku CFG ifayela lendiza, bese upheqela phansi kusigaba [se-Engine] sibheke umugqa Static_Thrust = Shintsha isibalo se-thrust up Isibonelo se-4000 Uma sifunda I-Static_Thrust = 22980 Engeza amakhilogremu angu-4000 we-thrust ngakho afundwa Static_Thrust = 26980 bese ulondoloza. Ngicabanga ukuthi uzothola ukuthi kusebenza kahle.
Ukuhlela kokugcina: Unyaka we-1 izinyanga ezingu-3 ezedlule DRCW.
Umsebenzisi alandelayo (s) wathi Thank You: isidel
unyaka 1 3 edlule #948 by misshu
Kuphi kumafayela kuyi-CFG? Ngizama ukukuthola futhi angibonakali ukukuthola
unyaka 1 3 edlule - unyaka 1 3 edlule #949 by DRCW
Sawubona, Kulungile chofoza isithonjana sakho sewindi noma qalisa ngakwesokunxele ngakwesokunxele kwesikrini sakho, iya kwikhompyutha, khetha i-drive C / uhlelo x86, i-microsoft, kufanele kube nefayela FSX, livule futhi kukhona uhlu olude ... khetha SimObjects, bese ukhetha Airplanes .... Yilapho indiza yakho ye-FSX igcinwa khona ... thola indiza oyifunayo ohlwini .. vula ifayela futhi kulolu hlu izindiza cfg Lona ifayela le-CFG. uma udinga usizo olunye ungangizise. Kungaba kuhle ukwazi ukuthi yiyiphi ingqikithi yamafasitela onayo. Njengoba ungakaze uvule ifayela le-cfg ngaphambi kokuchofoza ngakwesokudla kuso bese ukhetha uvulekile "inothi yemifanekiso [/ umbala]"
Nasi isibonelo sesigaba ozoyifuna:
Ngikhipha lokhu kusuka ku-CRJ-700
fuel_flow_gain = 0.002 // Thola ukuhamba kwephethiloli
i-inlet_area = 19.6 // I-Square Square, indawo ye-inlet ye-nacelle
ilinganiswe_N2_rpm = 29920 // RPM, i-compressor yesigaba sesibili esilinganisiwe
static_thrust = i-28000
emvaburner_available = 0 // Afterburner iyatholakala?
i-reverser_available = i-1 // i-reverser ye-Thrust iyatholakala?
ThrustSpecificFuelConsumption = 0.385 // Thrust ukusetshenziswa okukhethekile kagesi (Jets)
AfterBurnThrustSpecificFuelConsumption = 0 // TSFC ngemuva kokuhamba emuva / ukuvuselela kabusha
unyaka 1 3 edlule #964 by superskullmaster
Nginayo iphakheji yokuthuthukisa ukusebenza eyenzela wena konke. Ngokushesha lapho ngithola indlela yokuyilayisha ngiyothanda.
Isikhathi ukudala page: 0.247 imizuzwana